Iran: Fipoahana Mifono Mistery Tao Amin’ny Moskea · Global Voices teny Malagasy
Iran: Fipoahana Mifono Mistery Tao Amin'ny Moskea
Voadika ny 24 Oktobra 2017 3:20 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Shqip, Português, English
(Marihana fa efa tamin'ny volana Aprily taona 2008 no nivoaka ny lahatsoratra teny Anglisy)
Tao atsimon'i Iran, nisy fipoahana tao amin'ny moskea iray tao an-tanànan'i Shiraz, izay nahafatesana olona 12 raha kely indrindra ary naratra teo amin'ny 200 tamin'ny 12 Aprily. Nanambara ny tranokalam-baovao tsy tena ofisialy an'ny governemanta, Fars, fa noho ny baomba no nahatonga ny fipoahana. Taty aoriana, nanizingizina ny manampahefana Iraniana maromaro fa vokatry ny loza iray ny fipoahana. Mihevitra ny Imam ao amin'ny moskea fa fanafihana amin'ny baomba nataon'ireo milisy tsy fantatra izany, ary niantso ireo niharam-boina ho “maritiora” izy.
Nanangom-baovao ity tantara ity ireo bilaogera Iraniana ary nizara ny heviny momba ity tranga mihoso-drà ity sy ny tsaho manodidina azy.
Necas nilaza [Fa] hoe:
Ho ahy amin'ny maha Iraniana, tena goavana ny sivana amin'ity vaovao ity ao amin'ny haino aman-jery Iraniana. Hatramin'ny 2 maraina, tsy nisy ny vaovao momba ity fipoahana ity tao amin'ny fahitalavitra Iraniana. Nitatitra momba ny takalon'aina tany an-tsekoly na toeram-pivarotana tany Etazonia ity fahitalavitra ity ary nanomboka nanombantombana. Avy eo nilaza fa mametraka sivana amin'ny haino aman-jeriny i Etazonia. 12 ora taorian'ny fipoahana tao Iran, niely ny vaovao, ary nilaza izy ireo fa tsy noho ny baomba no nahatonga ny fipoahana. Tsy miantso ireo maty ho maritiora izy ireo, fa olona maty tsotra fotsiny.
Efa nisy nitsidika in-60.000 mahery tao amin'ny YouTube ny lahatsarin'ity fipoahana ity. Fotoana vitsy taorian'ny fipoahana tao amin'ny lahatsary, misy feo mangataka amin'ny olona mba handeha, ​​ary koa milaza hoe, “Ny ho maritiora no faniriantsika …”:
Nitsikera ny fahitalavitra Iraniana ho tsy miresaka ny vaovao momba ny fipoahana i Parcham. Nilaza izy fa mihevitra ianao fa tsy maintsy ny Arabo no tena tompon'i Iran, satria avoaka avy hatrany ny vaovao momba an'i Iraka sy Palestina, fa tsy ny antsika.
Nifantoka ny fampianarany momba ny finoana Baha'i sy Wahabism ny foibe toera-pivavahana.
Bacheyeh khat indray nanoratra momba ny toera-pivavahana Rahpouyan Vesal. Nilaza izy fa tanora mpitondra fivavahana izay naratra nandritra ny adin'i Iran sy i Iraka antsoina hoe Mohmmad Anjavinejad no mpanorina azy. Na dia lazaina fa tanora eo anelanelan'ny 15 sy 20 taona aza ny ankamaroan'ny mpihaino azy, mihevitra ny sasany fa efa lany andro ny fampianarany, ary namazivazy fa matory ao anaty fasam-poana ny mpanara-dia azy any am-pasana. Nilaza koa ity bilaogera ity fa nirotsaka nofidiana tamin'ny fifidianana kaominaly ireo mpikambana tao amin'ny vondrom-pivavahana saingy seza iray monja no azony tamin'ireo 11 tao amin'ny Filan-kevitry ny tanàna.